48V 1000W Fat Taya Mountain Ebike | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa kacha mma igwe eletrik 48V 1000W igwe eletrik na-agba ịnyịnya igwe ugwu A7AT26
48V 1000W igwe eletrik na-agba ịnyịnya igwe ugwu A7AT26
Motor: 750w / 1000w moto na-enweghị ntụpọ
Batrị: 48v 20ah / 23ah / 30ah batrị lithium
Usoro breeki: 180mm usoro diski igwe
48V 1000W igwe eletrik na-agba ịnyịnya igwe
Kwalite ikike eletrik dị elu abụba taya ugwu igwe kwụ otu ebe jiri 1000W mini brushless moto, nke na-arụ ọrụ karịa otu ebe ma rụọ ọrụ nke ọma. Jikọta na batrị lithium 48v buru ibu iji nweta mkpa na ngwa ngwa. Riddị ịnya ụzọ atọ - E-Bike mode, Pedal-Asisst mode, Pedaling mode. Igwe eletrik a na-agba ịnyịnya eletrik nwekwara ike igbo mkpa gị, dị ka mpụga n'okporo ụzọ, mmega ahụ n'èzí, ịgba ịnyịnya, njem kwa ụbọchị.
Ejiri 1000w igwe eletrik na eletriki igwe eletriki igwe kwụ n'azụ igwe, ọ na-eme igwe abụba iji ruo ọsọ ọsọ nke 40-45km / h n'okporo ụzọ dị larịị. Igwe eletrik eletrik dị elu na-enyekwa nnukwu onye inyeaka aka ịmegharị igwe kwụ otu ebe na mbara ala dị mfe. Na moto karịrị 80 percent arụmọrụ na n'okpuru 60 Db mkpọtụ. Niile nwere ike iwetara gị arụmọrụ dị elu mana ahụmịhe mkpọtụ mkpọtụ dị ala.
Bịa na a multi-ọrụ nnukwu ihuenyo LCD ngosi na-egosi ọtụtụ data nke e-igwe kwụ otu ebe, ihe atụ Anya, Mileage, Okpomọkụ, Battery ikike, Motor Power, Max Speed ​​wdg Ma magburu onwe waterproof ka ọ na-arụ ọrụ dị mma na mmiri ozuzo. Enyemaka aka ụkwụ ise na pịa mkpịsị aka, mee ka moto ahụ nwee ọsịsọ maka igwe eletriki igwe eletrik a.
Ikpokọta na 48V batrị lithium nwere ike imeghari gị dị iche iche chọrọ. Batterykpụrụ batrị dị mma bụ 20AH, ọ bụrụ na ịchọrọ higer, enwekwara 23AH na 30AH nwere ike ịhọrọ. Iji batrị imewe ohuru nwere nke enwere ike iwepu bu otu n’ime ihe omuma nke igwe a. Enweghị mkpa ịkwaga ndị a buru ibu n'akụkụ nso. Naanị mkpa ịgbanye igodo ahụ iji wepụ batrị ahụ, wee kwụnye batrị n'ụlọ ma ọ bụ ebe ndị ọzọ nwere oghere nwere chaja 54.6V 2A, wee chere oge 6-8 na-akwụ ụgwọ oge iji gwụ. Adaba na mfe iji rụọ ọrụ.
Wheelgbọ ụkwụ ihu na azụ na-eji sistemu breeki diski 180, ọbụlagodi na mmiri ma ọ bụ oyi ma ọ bụ ihu igwe ma ọ bụ ọnọdụ ọnọdụ mberede, ọ nwere ike ịnye ike braking ozugbo. Ma jiri ntọala ntọhapụ ọsọ ọsọ na wiilị ụkwụ ihu, ọ dị mfe iwepu wiilị dị n'ihu mgbe ịchọrọ. Enwekwara ike ịhọrọ breeki hydraulic.
Ọkụ ọkụ ọhụrụ emere n'azụ ọkụ, na-akwado ọkụ mgbe ọ na-akụ (Ma ọ na-akụ n'ihu ma ọ bụ na azụ azụ), ọkụ a nwere ike ichetara ndị ọzọ na ụgbọ ala ka ha toaa ntị iji hụ na nchekwa gị na-agba n'abalị.
26 * 4.0 nke anụ ọhịa ahụ nwere taya nwere ike ịrụ ọrụ karị, mmetụta dị mma na nchekwa. Ọbụna okporo ụzọ ugwu, n'okporo ámá obodo, snow, osimiri ma ọ bụ okporo ụzọ adịghị ọcha, ọ nwere ike ijikwa ha n'ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ na i nwere mmasị na ụgbọ elu eletrik eletrik dị elu, gaa 2000w elektriki abụba abụba, 500W igwe kwụ otu ebe, 750W bafang moto fat kinke.
Tags:eletriki ike abụba igwe kwụ otu ebe igwe eletriki abuba
Mbụ: 29-anụ ọhịa kacha mma zuru ezu nkwusioru ugwu igwe eletriki A6AH26-SM
Next: 48v 500w / 750w ike igwe eletriki igwe kwụ otu ebe A6AH26